Buuggii Zlatan oo ka mid noqday musharrixiinta abaalmarinta Augusti - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Buuggii Zlatan oo ka mid noqday musharrixiinta abaalmarinta Augusti
Xasuus-qorkii Zlatan oo la magacaabey
La daabacay måndag 26 november 2012 kl 11.41
Sharraxaadda buugagta u tartamaya biladda abaal-marinta August waxaa fajacisa noqodtay inuu ka mid noqdo qoraaga David Lagercrantz ee qoray buuggii xusuus-qorka ee cayaar-yahanka Zlatan ee loogu magac-daray "waxaan ahay Zlatan Ibrahimovic - Jag är Zlatan Ibrahimovic". Dhanka kale waxay middaasi ka cajabisay qoraaga laf-ahaantiisa, iyadoona ay tahay markii ugu horeeysay ee uu ka mid noqdo xubnaha loo magacaabey ee u tartami doona abaal-marintaa":
- Amuurtaa waxay igu noqotay mid iga fajicisay. Waan rajeeynayay in buugga si xooggan loo iibsan doono, hase yeeshee ma aanan filayn in loo magacaabo abaal-marin la xiriirta qoraallada dhaqanka, ama ey aqoonsadaan suxufiyiinta wax ka qora dhaqanka. Maadaama aan buugagta xusuus-qorka ee cayaartooyda aan inta badan loo magacaabin abaal-marinta August. Middaasi waxay caddeeynaysaa kaalinta qiimaha leh ee buuggani leeyahay.
Horay ayuu Lagercrantz uga qoray xusuus-qor dadyoow caan ah oo ey ka mid yihihiin culimo, xisaab-yahanno, muhandiseyaal iyo wixi la mid ah. Isagoona xiiseeya dadka aan caadiga aheyn ee maskaxda badan, sida uu sheegay. Dhanka kale ma aanu xiiseenayn inuu isga iskaga hadlo xusuus-qorradaa, hase yeeshee kolkii la weydiiyey inuu wax ka qoro xusuus-qorka Zlatan, marna kama aannu gelin shaki middaa:
- Waxaan ku qeeyliyay haa!
Waxaa la oran karaa marka inaad kubbadda cagta xiiseeyso?
- may, ma aha cayaarta waxa aan xiiseeyo, waxaan xiiseeyay sawirka qiimaha leh ee Zlatan bulshada ku dhex leeyahay. Waxa markiiba ii muuqatay qisada cajiibka leh.
Buugagta qisadaha mareeykanka ayaa marar badan looga sheekeeyaa shakhsi ku soo barbaaray fakhri ee isla-markaana gaaray gool aad u sarreeya ee uu ku noolaado nolol wanaagsan, halka dalkan Iswiidhen uu soo-galootigu ku cusub yahay. Waxaa haddaba halkaa iiga muuqday sheeko kuwaa u dhiganta Ruux ku soo barbaaray xaafadaha ey fuquradu ku dhaqan yihiin, gaarayna nolol wanaagsan. Xaafadahaa oo aan wax sidaa u badan aan laga qorin. Waxaa halkaa iiga muuqday sheeko-xariir la xiriirta sida dabaqado la isaga dhex gooshay.
Buugga xusuus-qorka ee cayaar-yahanka Zlatan ayaa aad bulshada u xiisa-geliyey, maadaama uu ahaa mid looga sheekoonayey si qalbad furan, hase yeeshee ma ahayn mid sidaa laga filayey, xitaa hadduu Zlatan bilowgiiba qabay inuu noloshiisa si furan uga sheekeeyo:
- Halka laga tallaabo qaadayaey ayaa ahayd inuu noqdo buug xaqiiqda iyo dhibaatooyinka ka sheekaynaya. Inuu ka sheekeeyo wax walba. Xatooyadii iyo wixii la mid ah. Caqabaddu waxay na hor timid kolkii aan ogaaney in xaqiiqdu tahay mid isku dhafan. Run dhibaato u keeni karta reerkiisa oo uu aad u jeclaa, qaasatan aabbihii. Dababdeed waxaa soo baxday inuu aabbihii khamriga aad u badsan jiray o omararka qaarkood raashin laga waayi jirey qaboojiyaha. Waa xaalad aan muddo ka fekereyney, inaan wax ka qori karno iyo in kale? Maxay ku qori doonaan war-geeysyada xiiseeya fadeexuhu? Ma qori doonaan in Zlatan aabbihii ahaa qamriya cab?
Ugu dambeeyntii wuxuu Zlatan go'aansaday in runta gebi-ahaan la qoro. Buuggani wuxuu ka sheekeeynayaa xusuusta noloshiisii ee xaafadda Rosengård, hase yeeshee waxa mustaqbalka dhici doona war umuu hayo Lagercranz:
- Wuxuu sheegay inuu nolol deggan ugu noolaan doono dhulka uu ibsaday, hase yeeshee ma hubo inaan middaa rumeeysan karo. Waxay ila tahay in kolka caan-nimadu dhammaato oo uu sacabkii badnaa ee loo sacbinayey uu waayo uu u baahan doono jug hor leh, sida uu sheegay David Lagercranz oo ka warramayay Zlatan.